အသငျးကောငျးတှေ ပါဝငျလာတဲ့ DreamLeague Season 13: Leipzig Major ပှဲကွိုသုံးသပျခကျြ (Part-1) – Gaming Noodle
DreamLeague Season 13: The Leipzig Major ကိုတော့ လာမယျ့ဇနျနဝါရီ ၁၈ ရကျနေ့ (စနနေေ့) ည ၇ နာရီကနေ စတငျသှားမှာဖွဈပွီး ၂၆ ရကျနေ့ ည ၇ နာရီမှာ Grand Final ကစားမှာ ဖွဈပါတယျ။ 2019-2020 Dota Pro Circuit Season ရဲ့ ဒုတိယ မဂြောဖွဈပွီး ပထမမဂြောမှာ အနားယူတဲ့ အသငျးတှေ မြားပွားခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယ မဂြောမှာတော့ အသငျးကောငျးတျောတျောမြားမြား ပွနျပါလာတာကို တှရေ့မှာပါ။
အသငျးကွီးတှထေဲမှာဆို ဒုတိယမဂြောမှာ ပွနျစကစားတဲ့ Team Secret နဲ့ လကျမှနျပွနျရလာတဲ့ Na’Vi, VP တို့ ပွနျပါလာပွီး Bukovel Minor နောကျပေါကျကနေ ဝငျလာတဲ့ Nigma လညျး ပွနျလညျပါဝငျလာပါတယျ။ ကနျြခဲ့တဲ အသငျးကွီးဆိုလို့ လာမယျ့ တတိယမဂြောမှ ပွနျကစားမယျဆိုတဲ့ TI9 ခနျြပီယံ OG နဲ့ Open Qualifier မှာ ခွခြေျောသှားတဲ့ TI9 တတိယဆုရှငျ LGD.PSG တို့ပဲ မပါဝငျတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
ပွိုငျပှဲတှကေိုတော့ ဂြာမနီနိုငျငံ Leipzig (လိုကျပျဇဈဂျ) မွို့မှာ ကငျြးပမှာဖွဈပွီး Timezone ကတော့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ၅:၃၀ နာရီ ကှာခွားတာမလို့ အိပျရေးအပကျြခံပွီး ညနကျပှဲတှေ ကွညျ့ရနိုငျပါတယျ။ ပှဲတှကေိုတော့ Skynet က eGG Network မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပွီး Facebook မှာတော့ ပွညျတှငျး Dota2 Broadcasting Page အကုနျနီးနီး ပွသမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါကတော့ အသငျးကောငျးတှေ မြားပွားနတောမို့လို့ ဘယျအသငျးတှေ ဘယျလိုအဆငျ့ထိ တကျရောကျနိုငျမယျဆိုတာ ကြှနျတျောနဲ့ တူတူ သဘောထား ကှဲလှဲလိုကျရအောငျ!
TNC Predator (Group-A)
2019-2020 DPC Season ရဲ့ ပထမဆုံး Chendu Major ရဲ့ ခနျြပီယံ TNC Predators ကတော့ စောစောစီးစီး လကျစှမျးပွပွီး DPC Point ၄,၈၅၀ နဲ့အတူ ဦးဆောငျထားပါတယျ။ TI9 ပွီးပွီးခွငျး ကငျြးပခဲ့တဲ့ Chendu Major မှာ OG, LGD, Team Secret, Nigma, VP စတဲ့ အသငျးကွီးတှေ မပါသေးခြိနျမှာ ခနျြပီယံဆုကို ရယူနိုငျခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ TI 10 ဝငျခှငျ့ဟာ အခွအေနေ ကောငျးနပေါပွီ။
TI9 အပွီး ESL One Hamburg နဲ့ Chendu Major ၂ ခုဆကျခနျြပီယံ ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဒါဟာ အရငျ Patch အဟောငျးဖွဈတဲ့ Earthshaker + Morphling meta မှာ မငျးမူခဲ့တာပါ။ Outlander Update ထှကျအပွီးကငျြးပတဲ့ Leipzig Major SEA Qualifier မှာတော့ တတိယမွောကျ အသငျးအနနေဲ့သာ ဝငျခှငျ့ရခဲ့ပွီး One Esports Pro Invitational မှာလညျး Top8 သာ ဝငျခဲ့ပါတယျ။ အပွောငျးအလဲအနနေဲ့ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ Febby oppa ကို Coach အနနေဲ့ ချေါယူထားပါတယျ။
Coach အတှအေ့ကွုံမရှိပဲ Streamer အနနေဲ့သာ အောငျမွငျနတေဲ့ MVP အသငျးသားဟောငျး Febby ကို ဘာလို့ချေါလဲ ဆိုတာ စဉျးစားစရာပါ။ လကျရှိအသငျးမှာပါဝငျတဲ့ Kpii တို့ March တို့နဲ့ လကျတှဲခဲ့ဖူးလို့ ချေါတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ နညျးပွသဈနဲ့ Patch အသဈမှာ အရငျလို meta abuse လုပျနိုငျရငျတော့ Top4လောကျထဲ ဝငျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Team Aster (Group-A)
တရုတျ Qualifier မှာ တတိယနရောကနေ ဝငျရောကျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ Team Aster ဟာ ပထမ Chendu Major မှာလညျး အခွနေေ မကောငျးခဲ့ပါဘူး။ ကံဆိုးတာကလညျး Group-A မှာ Nigma, Fnatic, TNC တို့နဲ့ တူတူ သမေငျးအုပျစုထဲမှာ တူတူကရြောကျနပေါတယျ။
Chendu Major ခနျြပီယံ TNC ရယျ Bukovel ခနျြပီယံ Nigma ရယျ SEA မှာ ထိပျဆုံးက Qualifier အောငျလာတဲ့ ၃ သငျးကွားထဲမှာ Upper Bracket ရောကျရငျကိုပဲ ပှဲခံသငျ့နပေါပွီ။ Sccc နဲ့ BoBoKa တို့ လကျစှမျးပွနျပွမပွပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
SEA မှာ TNC ကို ကြျောပွီး ထိပျဆုံးက တကျလာပမေယျ့ အဲဒီ လကျစှမျးကို ထိနျးသိမျးဖို့လိုပါတယျ။ Fnatic ရဲ့ ပွဿနာက Qualifier အောငျပွီး Main Event ရောကျရငျ လကျပြောကျတကျတာပါ။ SEA အိမျကွယျ Fnatic ကတော့ ဒီတဈခါ အသအေခြာ ပွငျဆငျထားပါတယျ။
Team Secret နညျးပွဟောငျး Sunbhie ကို ချေါယူခဲ့ပွီး Fantic ရုံးခြုပျတညျရှိရာ လနျဒနျမွို့မှာ နှဈစပိုငျးကတညျးက Bootcamp ဝငျနတောပါ။ နညျးပွသဈနဲ့ ပွငျဆငျမှုအားကောငျးနပေမေယျ့ သမေငျးအုပျစု (Group of death) မှာ ကရြောကျနတောမလို့ သူလညျး Aster လိုပဲ အုပျစုမှာ Top2ရပွီး Upper Bracket ရောကျရငျ တာဝနျကပြွေီလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။
အားလုံးထငျမှတျထားတဲ့အတိုငျး Bukovel Minor မှာ ခနျြပီယံ ဖွဈခဲ့ပါပွီ။ Bukovel Minor Preview မှာ စာရေးသူ ပွောခဲ့သလိုပဲ ဒီ Major မှာ Top 8 လောကျရောကျမှ သူ့ပရိသတျတှေ ကနြေပျကွမှာပါ။ စာရေးသူအမွငျအရ Minor က တကျလာတဲ့သူတှကေ Major မှာ ရလဒျကောငျးလေ့ ရှိပါတယျ။
အခွားအသငျးတှလေို ဒသေတှငျးအသငျးတှကြေျောပွီး Qualifier အောငျတာမဟုတျပဲ Minor မှာ တကမ်ဘာလုံးက အသငျး ၈ သငျးကိုကြျောပွီး ဗိုလျစှဲထားတာမို့လို့ လကျမှနျရနတေယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ ပထမ Minor မှာ ခနျြပီယံဖွဈပွီး Chendu Major မှာ တတိယအထိ ရခဲ့တဲ့ Invictus Gaming (IG) ကို မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။
Bukovel Minor ခနျြပီယံအနနေဲ့ နောကျဖေးပေါကျကနေ Major ကို ဝငျလာပွီး အရငျရောကျနတေဲ့ အိမျရှငျတှကေို တကျရိုကျမယျဆိုရငျလညျး TI9 ဒုတိယဆုရှငျတှအေတှကျ အဆနျးအကွယျ ဖွဈမှာ မဟုတျပါဘူး။ ခဈြသူမုနျးသူ မြားလှတဲ့ Nigma အတှကျ Top6လောကျအထိတော့ ရောကျရှိနိုငျမယျ ထငျပါတယျ။
Vici Gaming (Group-B)
ပထမ Chendu Major ဒုတိယနဲ့ One Esports Pro Invitational ခနျြပီယံ ဆုရှငျ Vici Gaming ကတော့ ယခုပွိုငျပှဲရဲ့ ခနျြပီယံဆုကို ခွိမျးခွောကျနိုငျမယျ့ အသငျးတှထေဲက တဈသငျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိလူစာရငျးက တှဲကစားတာ ကွာနပွေီမလို့ အသငျးသားအခငျြးခငျြး နားလညျမှုက ပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။
Outlander Update ကိုလညျး နောကွနေကွေောငျးကို One Esports ပှဲမှာ သကျသပွေပွီးပါပွီ။ Coach rOtK ရဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာ ဒီ Leipzig Major ရပျတညျမှုကတော့ Top3လောကျ အနညျးဆုံးရောကျရှိနိုငျပါတယျ။ ခနျြပီယံ ဖွဈသှားမယျဆိုလညျး မထူးဆနျးလောကျပါဘူး။
Chaos Esports (Group-B)
Quincy Crew ကို ချေါယူခဲ့တဲ့ Chaos Esports ကတော့ Sumail ထှကျသှားတဲ့အတှကျ အဖွရှောနဆေဲပါပဲ။ အရငျ Offlaner Yawar က Sumail နရောကို ဖွညျ့ကစားပွီး Offlane နရောအတှကျ SaberLight ကို စမျးသပျခဲ့ရာကနေ အခုတော့ Hellraiser က လူငယျ Offlaner “DM” နဲ့ အသားကနြပေါတယျ။ North America Qualifier မှာ EG, NiP, Fighting Pandas တို့ကို ဖွတျကြျောပွီး ပထမဆုံး Qualifier အောငျခဲ့တဲ့အတှကျ အခဉျြတော့ မဟုတျပါဘူး။
ကံဆိုးတာက Vici Gaming နဲ့ Team Secret တို့နဲ့အတူ တဈအုပျစုထဲ ရောကျနခေဲ့လို့ ထိပျဆုံး ၂ သငျးအနနေဲ့ Upper Bracket ရောကျဖို့ အတျောကို ရုနျးကနျရမှာပါ။ လကျစှမျးမပွနိုငျရငျတော့ အိမျဖွညျ့အဆငျ့နဲ့ အိမျပွနျစောသှားနိုငျပါတယျ။
ပီရူးကစားသမားတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Beastcoast ဟာ Team Secret, Vici Gaming, Chaos Esports တို့နဲ့ တူတူ Group B ကိုကရြောကျနပေါတယျ။ အပျေါယံကွညျ့လိုကျရငျ အိမျဖွညျ့သကျသကျပဲလို့ ထငျရမှာပါ။ဒါပမေယျ့ Beastcoast ရဲ့ ကစားသမားတှဟော TI9 မှာ Top 8 အထိရပွီး မထငျမှတျတဲ့ လကျစှမျးတှေ ပွသခဲ့တဲ့ Infamous အသငျးက ကစားသမား ၅ ယောကျနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာမလို့ သတိထားရမှာပါ။ Upper Bracket ရောကျခဲ့ရငျတော့ ဒီ ပီရူးအသငျးကို မကျြလုံးဒေါကျထောကျ ကွညျ့ရပါတော့မယျ။
Team Secret (Group-B)
ပထမ Major ကို အနားယူခဲ့တဲ့ Team Secret အနနေဲ့ ဒီ Leipzig Major က လူစာရငျးအသဈ နညျးပွအသဈနဲ့ လူစုံတကျစုံ ပါဝငျလာမယျ့ ပထမဆုံးပွိုငျပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ Matumbaman နဲ့ နညျးပွ Heen တို့ကို အသဈချေါယူထားပမေယျ့ ပှဲဦးထှကျ One Esports ပှဲမှာတော့ YapzOr နရောမှာ MidOne က Standin ဝငျဆော့ခဲ့လို့ အဲဒီပှဲရလဒျအကွောငျး မပွောလိုတော့ပါဘူး။
EU Qualifier မှာလညျး Nigma ကိုဖွုတျခပြွီး ပထမဆုံး Qualifier အောငျတဲ့ အသငျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ပထမ Major မှာလညျး ကောငျးကောငျးအနားရနတေဲ့အပွငျ လူစာရငျးအသဈနဲ့ TI ခနျြပီယံ နညျးပွ Heen နဲ့ Puppey ရဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာ ဒီ Major ရဲ့ ခနျြပီယံဆု စိနျချေါမယျ့ အသငျးတဈသငျးအနနေဲ့ လေးစားရမှာပါ။ Draft အဆနျးတှနေဲ့ ဖြျောဖွမှေုကို လိုကျပါခံစားဖို့သာ အသငျ့ပွငျထားကွပါ။
Group-C နဲ့ Group-D အသငျးမြားအတှကျ သုံးသပျခကျြမြားပါဝငျတဲ့ အပိုငျး (၂) ကို မနကျဖွနျ (၁၈ ရကျ စနနေေ့) မနကျမှာ ဖျောပွပေးသှားပါမယျ ခငျဗြာ။
အသင်းကောင်းတွေ ပါဝင်လာတဲ့ DreamLeague Season 13: Leipzig Major ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် (Part-1)
DreamLeague Season 13: The Leipzig Major ကိုတော့ လာမယ့်ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ (စနေနေ့) ည ၇ နာရီကနေ စတင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ၂၆ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီမှာ Grand Final ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2019-2020 Dota Pro Circuit Season ရဲ့ ဒုတိယ မေဂျာဖြစ်ပြီး ပထမမေဂျာမှာ အနားယူတဲ့ အသင်းတွေ များပြားခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယ မေဂျာမှာတော့ အသင်းကောင်းတော်တော်များများ ပြန်ပါလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အသင်းကြီးတွေထဲမှာဆို ဒုတိယမေဂျာမှာ ပြန်စကစားတဲ့ Team Secret နဲ့ လက်မှန်ပြန်ရလာတဲ့ Na’Vi, VP တို့ ပြန်ပါလာပြီး Bukovel Minor နောက်ပေါက်ကနေ ဝင်လာတဲ့ Nigma လည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ အသင်းကြီးဆိုလို့ လာမယ့် တတိယမေဂျာမှ ပြန်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ TI9 ချန်ပီယံ OG နဲ့ Open Qualifier မှာ ခြေချော်သွားတဲ့ TI9 တတိယဆုရှင် LGD.PSG တို့ပဲ မပါဝင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံ Leipzig (လိုက်ပ်ဇစ်ဂ်) မြို့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Timezone ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ၅:၃၀ နာရီ ကွာခြားတာမလို့ အိပ်ရေးအပျက်ခံပြီး ညနက်ပွဲတွေ ကြည့်ရနိုင်ပါတယ်။ ပွဲတွေကိုတော့ Skynet က eGG Network မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Facebook မှာတော့ ပြည်တွင်း Dota2 Broadcasting Page အကုန်နီးနီး ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါကတော့ အသင်းကောင်းတွေ များပြားနေတာမို့လို့ ဘယ်အသင်းတွေ ဘယ်လိုအဆင့်ထိ တက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ တူတူ သဘောထား ကွဲလွဲလိုက်ရအောင်!
2019-2020 DPC Season ရဲ့ ပထမဆုံး Chendu Major ရဲ့ ချန်ပီယံ TNC Predators ကတော့ စောစောစီးစီး လက်စွမ်းပြပြီး DPC Point ၄,၈၅၀ နဲ့အတူ ဦးဆောင်ထားပါတယ်။ TI9 ပြီးပြီးခြင်း ကျင်းပခဲ့တဲ့ Chendu Major မှာ OG, LGD, Team Secret, Nigma, VP စတဲ့ အသင်းကြီးတွေ မပါသေးချိန်မှာ ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ TI 10 ဝင်ခွင့်ဟာ အခြေအနေ ကောင်းနေပါပြီ။
TI9 အပြီး ESL One Hamburg နဲ့ Chendu Major ၂ ခုဆက်ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒါဟာ အရင် Patch အဟောင်းဖြစ်တဲ့ Earthshaker + Morphling meta မှာ မင်းမူခဲ့တာပါ။ Outlander Update ထွက်အပြီးကျင်းပတဲ့ Leipzig Major SEA Qualifier မှာတော့ တတိယမြောက် အသင်းအနေနဲ့သာ ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး One Esports Pro Invitational မှာလည်း Top8 သာ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Febby oppa ကို Coach အနေနဲ့ ခေါ်ယူထားပါတယ်။
Coach အတွေ့အကြုံမရှိပဲ Streamer အနေနဲ့သာ အောင်မြင်နေတဲ့ MVP အသင်းသားဟောင်း Febby ကို ဘာလို့ခေါ်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ လက်ရှိအသင်းမှာပါဝင်တဲ့ Kpii တို့ March တို့နဲ့ လက်တွဲခဲ့ဖူးလို့ ခေါ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပြသစ်နဲ့ Patch အသစ်မှာ အရင်လို meta abuse လုပ်နိုင်ရင်တော့ Top4လောက်ထဲ ဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တရုတ် Qualifier မှာ တတိယနေရာကနေ ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ Team Aster ဟာ ပထမ Chendu Major မှာလည်း အခြေနေ မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ကံဆိုးတာကလည်း Group-A မှာ Nigma, Fnatic, TNC တို့နဲ့ တူတူ သေမင်းအုပ်စုထဲမှာ တူတူကျရောက်နေပါတယ်။
Chendu Major ချန်ပီယံ TNC ရယ် Bukovel ချန်ပီယံ Nigma ရယ် SEA မှာ ထိပ်ဆုံးက Qualifier အောင်လာတဲ့ ၃ သင်းကြားထဲမှာ Upper Bracket ရောက်ရင်ကိုပဲ ပွဲခံသင့်နေပါပြီ။ Sccc နဲ့ BoBoKa တို့ လက်စွမ်းပြန်ပြမပြပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
SEA မှာ TNC ကို ကျော်ပြီး ထိပ်ဆုံးက တက်လာပေမယ့် အဲဒီ လက်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်။ Fnatic ရဲ့ ပြဿနာက Qualifier အောင်ပြီး Main Event ရောက်ရင် လက်ပျောက်တက်တာပါ။ SEA အိမ်ကြယ် Fnatic ကတော့ ဒီတစ်ခါ အသေအချာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
Team Secret နည်းပြဟောင်း Sunbhie ကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီး Fantic ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ လန်ဒန်မြို့မှာ နှစ်စပိုင်းကတည်းက Bootcamp ဝင်နေတာပါ။ နည်းပြသစ်နဲ့ ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းနေပေမယ့် သေမင်းအုပ်စု (Group of death) မှာ ကျရောက်နေတာမလို့ သူလည်း Aster လိုပဲ အုပ်စုမှာ Top2ရပြီး Upper Bracket ရောက်ရင် တာဝန်ကျေပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း Bukovel Minor မှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ Bukovel Minor Preview မှာ စာရေးသူ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီ Major မှာ Top 8 လောက်ရောက်မှ သူ့ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်ကြမှာပါ။ စာရေးသူအမြင်အရ Minor က တက်လာတဲ့သူတွေက Major မှာ ရလဒ်ကောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။
အခြားအသင်းတွေလို ဒေသတွင်းအသင်းတွေကျော်ပြီး Qualifier အောင်တာမဟုတ်ပဲ Minor မှာ တကမ္ဘာလုံးက အသင်း ၈ သင်းကိုကျော်ပြီး ဗိုလ်စွဲထားတာမို့လို့ လက်မှန်ရနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ပထမ Minor မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး Chendu Major မှာ တတိယအထိ ရခဲ့တဲ့ Invictus Gaming (IG) ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Bukovel Minor ချန်ပီယံအနေနဲ့ နောက်ဖေးပေါက်ကနေ Major ကို ဝင်လာပြီး အရင်ရောက်နေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို တက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း TI9 ဒုတိယဆုရှင်တွေအတွက် အဆန်းအကြယ် ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်သူမုန်းသူ များလှတဲ့ Nigma အတွက် Top6လောက်အထိတော့ ရောက်ရှိနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ပထမ Chendu Major ဒုတိယနဲ့ One Esports Pro Invitational ချန်ပီယံ ဆုရှင် Vici Gaming ကတော့ ယခုပြိုင်ပွဲရဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်မယ့် အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလူစာရင်းက တွဲကစားတာ ကြာနေပြီမလို့ အသင်းသားအချင်းချင်း နားလည်မှုက ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။
Outlander Update ကိုလည်း နောကြေနေကြောင်းကို One Esports ပွဲမှာ သက်သေပြပြီးပါပြီ။ Coach rOtK ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ဒီ Leipzig Major ရပ်တည်မှုကတော့ Top3လောက် အနည်းဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ချန်ပီယံ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလည်း မထူးဆန်းလောက်ပါဘူး။
Quincy Crew ကို ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ Chaos Esports ကတော့ Sumail ထွက်သွားတဲ့အတွက် အဖြေရှာနေဆဲပါပဲ။ အရင် Offlaner Yawar က Sumail နေရာကို ဖြည့်ကစားပြီး Offlane နေရာအတွက် SaberLight ကို စမ်းသပ်ခဲ့ရာကနေ အခုတော့ Hellraiser က လူငယ် Offlaner “DM” နဲ့ အသားကျနေပါတယ်။ North America Qualifier မှာ EG, NiP, Fighting Pandas တို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ပထမဆုံး Qualifier အောင်ခဲ့တဲ့အတွက် အချဉ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကံဆိုးတာက Vici Gaming နဲ့ Team Secret တို့နဲ့အတူ တစ်အုပ်စုထဲ ရောက်နေခဲ့လို့ ထိပ်ဆုံး ၂ သင်းအနေနဲ့ Upper Bracket ရောက်ဖို့ အတော်ကို ရုန်းကန်ရမှာပါ။ လက်စွမ်းမပြနိုင်ရင်တော့ အိမ်ဖြည့်အဆင့်နဲ့ အိမ်ပြန်စောသွားနိုင်ပါတယ်။
ပီရူးကစားသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Beastcoast ဟာ Team Secret, Vici Gaming, Chaos Esports တို့နဲ့ တူတူ Group B ကိုကျရောက်နေပါတယ်။ အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင် အိမ်ဖြည့်သက်သက်ပဲလို့ ထင်ရမှာပါ။ဒါပေမယ့် Beastcoast ရဲ့ ကစားသမားတွေဟာ TI9 မှာ Top 8 အထိရပြီး မထင်မှတ်တဲ့ လက်စွမ်းတွေ ပြသခဲ့တဲ့ Infamous အသင်းက ကစားသမား ၅ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမလို့ သတိထားရမှာပါ။ Upper Bracket ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ဒီ ပီရူးအသင်းကို မျက်လုံးဒေါက်ထောက် ကြည့်ရပါတော့မယ်။
ပထမ Major ကို အနားယူခဲ့တဲ့ Team Secret အနေနဲ့ ဒီ Leipzig Major က လူစာရင်းအသစ် နည်းပြအသစ်နဲ့ လူစုံတက်စုံ ပါဝင်လာမယ့် ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Matumbaman နဲ့ နည်းပြ Heen တို့ကို အသစ်ခေါ်ယူထားပေမယ့် ပွဲဦးထွက် One Esports ပွဲမှာတော့ YapzOr နေရာမှာ MidOne က Standin ဝင်ဆော့ခဲ့လို့ အဲဒီပွဲရလဒ်အကြောင်း မပြောလိုတော့ပါဘူး။
EU Qualifier မှာလည်း Nigma ကိုဖြုတ်ချပြီး ပထမဆုံး Qualifier အောင်တဲ့ အသင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ Major မှာလည်း ကောင်းကောင်းအနားရနေတဲ့အပြင် လူစာရင်းအသစ်နဲ့ TI ချန်ပီယံ နည်းပြ Heen နဲ့ Puppey ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ဒီ Major ရဲ့ ချန်ပီယံဆု စိန်ခေါ်မယ့် အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ လေးစားရမှာပါ။ Draft အဆန်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို လိုက်ပါခံစားဖို့သာ အသင့်ပြင်ထားကြပါ။
Group-C နဲ့ Group-D အသင်းများအတွက် သုံးသပ်ချက်များပါဝင်တဲ့ အပိုင်း (၂) ကို မနက်ဖြန် (၁၈ ရက် စနေနေ့) မနက်မှာ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ် ခင်ဗျာ။